Timo jarista iyo Asturnaanta, Farogelinta ama Khibradda Isticmaalaha? | Martech Zone
Timo jarista iyo Asturnaanta, Farogelinta ama Khibradda Isticmaalaha?
Talaado, Juun 12, 2007 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Labadii usbuucba mar ayaan booqdaa degmadayda Jimicsiga. Marwalba ma helo goynta saxda ah, laakiin waa qaali oo dadka ka shaqeeya halkaas ayaa runtii aad u fiican. Waxa ugu muhiimsan, in kastoo, ay tahay 'Supercuts' waxay xasuusataa qofka aan ahay. Markii aan dhex galo, waxay i weydiistaan ​​magacayga iyo lambarka taleefankayga, kuna dhex galaan nidaamkooda, waxayna dib u helaan qoraal ay ku qoran yihiin illaa iyo inta timahaygii ugu dambeeyay iyo sidoo kale sida aan u jeclahay (# 3 agagaarka iyadoo maqaska lagu gooyay xagga sare , taagan).
Ka faa'iideysiga macluumaadka (gaarka ah) ee aan bixiyay waxay ka dhigeysaa waayo-aragnimadayda isticmaale ee 'Supercuts' mid wanaagsan waxayna iga dhigaysaa inaan soo laabto. Fikrad xiiso leh, huh? Waxaan jecelahay soo noqnoqoshada meelaha ay ku xasuustaan ​​magacayga, sida aan u jeclahay kafeygayga, sida aan u jeclahay shaatiyadayda oo la cuno, ama xitaa sida aan u jeclahay timahayga la jaray! Waxaan ku soo noqnoqonayaa in ka badan maxaa yeelay waayo-aragnimadu aad bay uga fiicantahay. Waxaan dagay hudheello qaali ah oo aan aad ula yaabay markii ilaaliyaha uu kadhigay hal dhibic inaan ku xasuusto magacayga. Waa dadaalkaas yar ee igu xanibay soo noqoshada iyo ballaarinta ganacsigeyga. Shirkadaha ururiya oo adeegsada xogta labadaba waa guuleystaan ​​waana la qadariyo.
Qalabyadayda, bogaggayga, iyo caadooyinkayga internetka waa inaysan ka duwanaan, sax? Waxaan u gudbiyaa macluumaadka… mararka qaarkood macluumaad shaqsiyeed… boggaga internetka iyo nidaamyada si aan kor ugu qaado khibradeyda iyaga. Amazon Si dhow ula socda wax iibsigayga ka dibna waxaan kugula talinayaa waxyaabo dheeraad ah oo aan xiiseyn karo. Haddii aan aado bar weyn, Google Adwords oo la socda waxyaabaha laga yaabo inay ii tilmaamaan wax soo saar ama adeeg aan xiiseynayo. Haddii aan wax ka sheego saaxiibkay goobta, macluumaadkeyga waxaa lagu keydin karaa cookie sidaa darteed wey soo muuqataa sidaa darteed maahan inaan markale soo buuxiyo macluumaadka. Tani waa cajiib! Waqti ayey iga ilaalisaa waxayna ii keentaa natiijooyin wanaagsan. Miyaanay ahayn waxa ku saabsan oo dhan?
Xaqiiqda ah in ficil kasta iyo xoq kasta oo xog ah oo aad geliso internetka loo isticmaali karo si loo hagaajiyo khibradaada isticmaale waa fantastic, dhib malahan. Xogta si iskood ah ayaa loo ururiyaa, dabcan. Uma baahnid inaad aqbasho cookies, ma gasho boggaga internetka, isticmaal kuwa kale, ama xitaa ku xir internetka oo dhan. Aniga ahaan, asturnaanta maahan arrinta gabi ahaanba, amniga ayaa ah arrinta. Qarsoodiga Caalamiga ah ayaa dhawaan la socday ka dib markii Google ay siisay qiimeyntii ugu xumeyd abid ee 'asturnaanta'. Markii aan aqrinayay maqaalka, runtii waxaan u maleeyay inay tahay shay qayaxan oo la sameeyo. Xogta ururinta Google ayaa ah mid si uun loogu dhisayo khibrado wanaagsan kuwa isticmaala iyo sidoo kale inay ku xirmaan ganacsiga macaamiisha.
Foog Googler, Matt Cutts wuxuu kajawaabay Privacy International iyadoo jawaab faahfaahsan oo aan moodayay runtiina aan qodbay. Google waxay shaqo layaableh ka qabataa amniga - goorma ayey kuugu dambeysay markii ugu dambeysay ee aad maqasho wax ku saabsan xog gaar loo leeyahay oo la jabsaday ama si shil ah looga sii daayay Google?
Google cidna kama iibinayso xogta, tusaalahoodu waa inay u oggolaadaan ganacsatadu inay helaan nidaamkooda, macaamiisha si ay u helaan, Google-na wuxuu isku xiraa labadooda. Taasi waa hab aan caadi aheyn waana mid aan ku qancay. Waxaan rabaa Google inay wax badan iga barato in khibradeyda adeegsiga barnaamijyadooda ay maalinba maalinta ka dambeysa ka sii fiicnaato. Waxaan rabaa inaan la gaaro shirkadaha ay igula taliyaan - kuwaas oo laga yaabo inay leeyihiin wax soo saar ama adeegyo aan xiiseyn karo.
Sidee ayey Asturnaanta Caalamiga ah u qiimeyn doontaa Supercuts kuwaas oo la socda inta jeer ee aan booqdo, yaa reerkeyga ah, iyo waxa doorbidyadeena timo jareerku yihiin? Waxaan qiyaasayaa inay rabaan inay Jirka ka joojiyaan ururinta macluumaadkaas. Markaa waa inaan sharraxaa naftayda markasta oo aan booqdo… ilaa aan ka istaago oo aan helo qof kale oo sameeyey la soco.
Waxaan u maleynayaa in qadka hoose uu yahay… shirkadahaas abuse xogtaada waa in laga fogaadaa, laakiin shirkadaha taas isticmaalka xogtaada waa in lagu abaalmariyaa. Ha iga joojin raadinta, Google! Waan jeclahay khibrada isticmaale ee aad bixiso.
Waxaan ku jeclahay dadka xayeysiinta…
Clicky WordPress Plugin oo leh Maamul La Sii Daayay
Jun 12, 2007 at 3: 39 PM
PS. Uma baahnin inaan wax sameeyo laakiin qor farriintan… ..b / c faallooyinkaaga durba way igu yaqaaniin kumbuyuutarkeyga shaqada iyo laptop-kayga. Taasi waa wax aad u wanaagsan …… waana iga dhigaysaa inaan muhiim ahay.
Jun 12, 2007 at 4: 30 PM
Waxaad waa muhiim ah! 🙂